परिवारको विरुद्धमा गएकै हुन् त शिल्पाकी बहिनी शमिता ? खुलेर भनिन्– अब मलाई शमिता शेट्टी बापट भन्नु – OSNepal
परिवारको विरुद्धमा गएकै हुन् त शिल्पाकी बहिनी शमिता ? खुलेर भनिन्– अब मलाई शमिता शेट्टी बापट भन्नु
बिग बोस प्रायः आफ्नो विवाद र झगडालाई लिएर चर्चामा रहन्छ। यससँगै दर्शकले केही जोडीबीचको राम्रो केमेस्ट्री पनि देख्न पाउँछन् । यसपटक पनि यस्तै भएको छ, जब बलिउड अभिनेत्री शमिता शेट्टी र राकेश बापटले बिग बोस ओटीटीमा प्रवेश गरेर आफ्नो जर्नी पुरा गरे । अहिले शमिता बिग बोसमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेकि छिन् । तर आज हामी बिग बोसे बारेमा कुरा गर्दैछौ ।
बिग बोस ओटीटीमा यी दुईबीचको केमेस्ट्री निकै राम्रो देखिएको थियो । दुबैको जोडीलाई फ्यानले निकै मन पराएका छन् । दुवैले एकअर्कालाई खासै मन पराउँदैनन् । त्यसपछि शमिताले बिग बोस १५ मा प्रवेश गरेपछि केही मतभेदका कारण दुवै एकअर्काबाट टाढा भए । तर हालै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो आएपछि अब फेरि यो जोडी चर्चामा आएको छ । तपाईलाई थाहा छ, राजीव अडातिया शोमा फर्किएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनका फ्यानहरु निकै खुसी छन् ।
यसै क्रममा राजीवलाई प्रतियोगी शमितासँग कुरा गरेको देखियो । दुबैजना एकअर्कासँग रमाइलो गरेको पनि देखियो । यसैबीच, राजीवले उनलाई सोध्छन् कि उनको मनमा राकेशको लागि अझै ठाउँ छ कि छैन। उनी अझै राकेशकी प्रेमिका हुन् । राकेशले अझै पनि माया गरेको बताउँछन् । यससँगै राजीवले राकेशसँग कुरा भएको बताउँछन् । उनी अझै पनि शमितालाई माया गर्छन्। त्यसपछि राजीवले ठट्टा गर्दै शमितालाई जिस्काउँदै भन्छन्( शमिता शेट्टी कुन्द्रा। आफुलाई शमिता शेट्टी कुन्द्रा नभन्नु होला भनेर शमिता आक्रोशित भइन् ।
बरु आफूलाई ‘शमिता शेट्टी बापट’ भन्न अनुरोध गरिन्। यतिबेलाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यसबारे मानिसहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । जहाँ केहीले शमिता र राकेशलाई ट्याग गरेर धेरै माया लुटेका छन् । योसँगै धेरैले शमितालाई शो जित्ने भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । केही समय अगाडि आएको मिडिया रिपोर्टमा शमिता र राकेशको सम्बन्धलाई उनीहरुको परिवारका सदस्यहरुले पनि निकै मन पराउने गरेको बताइन्छ । यसैबीच शमिताले पनि राकेशलाई बिर्सेकी छैनन् ।